IMF oo hakiday Ammaahda Malawi - BBC Somali
IMF oo hakiday Ammaahda Malawi
Hayadda Lacagta Adduunka ee IMF ayaa hakisay ammaahdii ay Malawi siinaysay iyadoo sheegtay in dowladda ay yarayn wayday mishaarka shaqaalaha.
Waa markii labaad ee ay IMF ay talaabadan qaaday. Sanadkii 2012-kii ayay IMF hakiday ammaahda Malawi, markii dowladda ay ku guuldaraysatay inay hoos u dhigto qiimaha lacagteeda iyo inay isbadal ku samayso miisaaniyadeeda.
Laba sanno ka hor deeq bixiyayaasha reer galbeedka ayaa ka joojiyay Malawi malaayiin dollar oo deeq ah kadib markii musuqmaasuq uu soo baxay. Afartan boqolkiiba miisaaniyada dowladda ayaa ahayd gargaar.